N'ọgwụgwụ, njem ikuku ikuku zuru ụwa ọnụ ga-abụ nke obi ọjọọ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » N'ọgwụgwụ, njem ikuku ikuku zuru ụwa ọnụ ga-abụ nke obi ọjọọ
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • News • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ịlaghachi n'ụgbọelu mgbe COVID-19 dị ka ịmụ ife efe ọzọ.
Ọdịnihu nke ụgbọ elu agaghị abụ otu, ụfọdụ na -ekwu na njem ga -abụ obi ọjọọ.
Ndị na -ebugharị akwụkwọ mgbe niile enwetala iwe na nkụda mmụọ nke ịrapara na larịị. Ebe ndị mmadụ na -eburukwa na mbara igwe "enyi" ọzọ, a na -atụ anya igbu oge karịa ka ọ dị na mbụ.
Ụgbọ elu ị tụrụ anya na ọ ga-abụ nkeji iri anọ na ise ga-atụgharị gaa njem ọtụtụ awa na-ama jijiji. Ka ọnọdụ ụgbọelu nọ na -ajọwanye njọ, ndị mmadụ na -ajụkarị "Nke a ọ bụ iwu n'iwu?"
Azịza ị na -achọghị ịnụ bụ na njigide tarmac gị nwere ike bụrụ nke iwu yana, maka ọdịnihu a na -atụ anya, ụlọ ikpe nwere ike chọọ inye ụgbọ elu ohere karịa ka ha ga -achọ n'okpuru iwu.
Ngalaba Ụgbọ njem nke United States (DOT) nwere iwu ọhụrụ gbasara ogologo oge a na -ahapụ ụgbọelu ka ọ nọrọ na tarmac na ọnọdụ dị a whataa. Mgbanwe nke iwu tarmac a bidoro laa azụ na 2016 wee bido naanị n'afọ a. Yabụ na ọ nweghị mgbanwe iwu ọ bụla nke oria ojoo kpaliri.
N'agbanyeghị ụgbọ elu ọ bụ, n'agbanyeghị ma ọ bụ onye nwe US ​​ma ọ bụ onye nwe ala ọzọ, ụgbọ elu ụlọ nwere ike ịnọdụ ala na tarmac karịa awa atọ. Maka ụgbọ elu mba ofesi, oke bụ awa anọ.
Ekwesịrị inwe ọkwa maka njide tarmac na akara nkeji iri atọ. Mgbe ahụ, n'ime awa abụọ, iwu kwuru na a ga -enye ndị njem mmiri, nri, na nlekọta ahụike n'ụgbọ elu ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Enwekwara ihe achọrọ na ụlọ ịsa ahụ dị n'ụgbọ elu na -arụ ọrụ nke ọma.
N'ikpeazụ, ozugbo akara elekere atọ/anọ kụrụ, ndị njem nwere ikike iwupụ ụgbọelu ahụ. Ọtụtụ mgbe, mgbe nke a mere, a na -akagbu ụgbọ elu ahụ n'ihi igbu oge agbakwunyere (dị ka mkpa iwepu akpa elele yana nsogbu ọ bụla ndị ọrụ na -arụ ọrụ nwere ike ibilite).
Nyere na nke a bụ njem ikuku, n'ezie, enwere ihe ndị ọzọ. Ihe a na -ahụkarị bụ ebe onye ọkwọ ụgbọ elu kpebiri na ụgbọ elu kwesịrị ịdịgide na tarmac maka nchekwa. Ọ dịkwa mkpa ka ndị njem ghọta na elekere igbu oge tarmac na -amalite naanị mgbe ịnweghị ike ịpụ n'ụgbọ elu. Ọ bụrụ na ị nọ ọdụ n'ọnụ ụzọ ámá, ọnụ ụzọ mepere emepe ma ndị njem nwere ike ịpụ n'ụgbọ elu, elekere amalitebeghị.
Adriana Gonzalez, onye ọka iwu Florida, na -echetara anyị na ọbụlagodi ebe ndị na -anya ụgbọelu nwere ike chee na ha nwere ezigbo ihe kpatara ịgbatị ọdụ ụgbọ okporo ígwè, anyị agaghị echefu ihe kacha mkpa ebe a:
“Ndị ụgbọ elu nwere ike kwuo na imezu ihe niile iwu chọrọ maka a tarmac oghered ga-abụ, n'echiche bara uru, dị mgbagwoju anya, ebe ha na-ebelata ọrụ ụgbọ elu n'oge ọrịa. Ụgbọ elu ga -adịkwu mgbanwe n'ịzaghachi ndị njem nọ na nsogbu na ọ dị mkpa ịhapụ ụgbọ elu tupu oge iwu tarmac nkịtị ga -etinye. Ahụike na nchekwa nke ndị njem ga -ebute ụzọ mgbe niile. ”
Site n'echiche nke ụgbọ elu, ọ dịla mgbagwoju anya ijikwa ụgbọ elu ọ bụla. Ọ bụghị naanị ihe egwu dị na ndị ọrụ ụgbọ elu na-ekesa n'ime ụlọ ma na-arụ ọrụ oge niile, ọ bụ ọgba aghara na sistemụ ọkọnọ. Ọ bụghị ihe niile a na -enye n'ụgbọ elu na oke ọnụọgụ dị ka ọ dị ugbu a dịka ọ dị na mbido 2020. Ọ bụ ezie na ndị njem ụgbọ elu ga -adị mkpa ime mgbanwe ebe okwu nnyefe a na -emetụta naanị ihe dị mma ịnwe (dịka nhọrọ a na -emebu. nri nri ma ọ bụ ma ndị ụgbọ elu na-enye mmanya n'ụgbọ elu), otu ihe agaghị enwe ike ịchụ aja bụ nchekwa.
Oge ọ bụla larịị na oge kacha mma na -ahụ na gburugburu ụgbọ mmiri na -enwe mmetụta mmetụta karịa awa ọ bụla ụgbọelu ahụ nọ n'ala. Ịga site na ndị njem na -ama jijiji site na nkụda mmụọ gaa ime ihe nkiri na inwe ọnọdụ na -adịghị mma n'ime ụgbọ mmiri bụ ihe ọ dị mkpa ka ndị na -anya ụgbọelu mara nke ọma ma nwee mmasị na ọnwa ole na ole sochirinụ. Ka anyị niile na -agba mbọ ịmara njem ụgbọ elu ọzọ, ndị na -anya ụgbọelu ekwesịghị naanị ịgbaso iwu niile emebere maka nchekwa ndị njem mana ha na -emehie n'akụkụ karịa ha.
nke Aron Solomon dere